एक महिला सन्तोष देउजाकोमा पुगेर भन्छिन – ‘मेरो जस्तो श्रीमान कसैको नहोस’ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
April 20, 2021 AdminLeaveaComment on एक महिला सन्तोष देउजाकोमा पुगेर भन्छिन – ‘मेरो जस्तो श्रीमान कसैको नहोस’ ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
हिजो आज सामाजिक घटना परिघटनाहरु सामाजिक संजालको माध्यमबाट संसारभर सार्बजनिक हुने गर्दछन । कतिले यस्ता घटनाहरुलाई न्याय पाउने आशामा सार्बजनिक गर्ने गर्दछन । कतिले आफ्नो आफ्नो पिडाबाट अरुले सजकता अपनाउन भएपनि सार्बजनिक गर्ने गर्दछन ।
यस्तै एउटा पिडित महिला आफ्नो पारिवारिक घटना मिडियामा सार्बजनिक गर्दै आइपुगेकी छन । ति महिलाको नाम हो रुकमाया बिक। उनको घर म्याग्दी जिल्लामा पर्छ । करिब १२ वर्ष अगाडी विवाह गरेकी उनले अहिले आएर आफ्नो श्रीमानले आफुलाई र आफ्नो सन्तानलाई हेरविचार नगरेको भन्दै गुनासो पोखेकी छन ।
उनको श्रीमानले छोडेर हिडेको पाच वर्ष भैसक्यो । अहिले सम्म न त उनि नै आउछन न त खर्च नै पठाउछन । बरु उनि त अर्कै महिलासंग विवाह गरेर बसेका छन । यता रुकमाया भने अपाङ्ग भएको कारण राम्रो काम गर्न समेत सक्दैनन् । पुरा भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोसः